တစ်ခါတရံမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ တစ်နေ့တာကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ မော်ဒယ်တွေလို ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ လမ်းလျှောက်ပုံမျိုးတွေ ကြည့်ချင်ကြမှာပါပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အွန်လိုင်းမှာအချိန်ဖြုန်းမိတဲ့ကာလလေးမှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာလေးကို မြင်တွေ့ရဖို့ အမှန်တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်တို့ရဲ့ ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်စည်းပေးဖို့ Rover လာပါပြီ။ Rover ရဲ့ ပိုင်ရှင်ဟာ အမျိုးမျိုးသောအဝတ်အစားဒီဇိုင်းတွေကို Rover လေးကို ဆင်မြန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဖက်ရှင်အပြင်အဆင်သာမကဘဲ Rover လေးရဲ့ လမ်းလျှောက်ပုံဟန်ပန်အမူအရာရဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုက လူတွေကို အမှန်တကယ်အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ မျက်စိအစာကျွေးကြမယ်…။
၁။ သူ့ကို ကြည့်ပါဦး။ Confidence level တွေက ဖြာထွက်မနေလွန်းဘူးလား? ဒီကြောင်လေးကို သူ့ရဲ့ အနီးနားပတ်ပတ်လည်မှာ ကင်မရာထားပြီး သူ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို Snap Photo တွေအဖြစ် ရိုက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Halloween ဝတ်စုံကတော့ လူတိုင်းရဲ့ အတွေးထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဝတ်စုံအမျိုးအစားပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လူသားတွေအတွက်တောင် အဆင်ပြေချင်မှ ပြေနိုင်မယ့် ဒီဝတ်စုံက Rover လေးအတွက်ကတော့ တော်တော်အလုပ်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
၃။ Rover ဟာ လမ်းလျှောက်ရတာကို အမှန်တကယ်နှစ်သက်သူပါ။ သူ့ရဲ့ စတိုင်လ်တွေကတော့ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ မရိုးနိုင်အောင်ပါပဲ။ တစ်ခါတရံမှာ သူက နွေးထွေးပြီး ပျူငှာတဲ့ စတိုင်လ်လေးဖြစ်နေပြီး တစ်ချို့အချိန်တွေမှာတော့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားနေတဲ့ Rover လေးကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ Christmas အတွက် စောလွန်းနေသေးတယ်ဆိုပေမယ့် Rover လေးကတော့ သောင်းကျန်းနေပါပြီ?
၅။ Quarantine ကာလအတွင်း ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မသွားနိုင်ရတော့တဲ့ Rover လေး..။
၆။ Rover လေးဆိုတာ တစ်ခြားကြောင်တွေထက် လူကြိုက်အများဆုံးကြောင်လေးအဖြစ် သက်သေပြနေပါတယ်။
၇။ ခုချိန်မှာ Rover လေးဟာ သင့်ရဲ့ ဘုရင်ပါပဲ။ သင်လိုရာ ဆုတောင်းနိုင်ပါပြီ။
၈။ Game of Thrones အတွက် Rover ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရုင်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ငတ်မွတ်နေကြတဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်တွေအတွက် သတင်းကောင်းတခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ထားကြတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပါဘဲ။ ဒီလိုကြည့်ရှုခွင့်ရတော့မယ့် ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာ ပရိသတ်တွေစွဲလမ်းနှစ်ခြိုက်ခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရုပ်ရှင်ကားတွေပါဝင်ခဲ့သလို အသစ်အသစ်သော ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေလည်း...
ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားအရ အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ပြီးချိန်မှာပြန်ကျရစမြဲ၊ အလင်းလက်ဆုံးတောက်ပခဲ့တဲ့ကြယ်တစ်ပွင့်ဟာ အာရုဏ်တက်ချိန်မှာကြွေကျရစမြဲပါ။ လူ့လောကမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ရှင်သန်ခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းက ဒွန်တွဲနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့သောသေဆုံးခြင်းက တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် ဝမ်းနည်းစရာပေါ့။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားကြီးအဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ဆာရှောင်ကွန်နရီဟာ အသက် (၉၀) အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီလို့ မိသားစုဝင်တွေက...
တစ်ချို့ K-pop အဖွဲ့တွေဟာ သူတို့ရဲ့ careers အစမှာကတည်းက အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ စတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရန်ပုံငွေမလုံလောက်ခြင်း(ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကင်းမဲ့ခြင်း)နှင့် လူကြိုက်များခြင်းကနေ ဖယ်ထုတ်ခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပူစရာမလိုမပါဘူး။ များပြားလှတဲ့ တစ်ချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေအခွင့်အလမ်းအတွက် အချိန်တွေမြောက်များစွာပေးပြီး ကြိုးစားရုန်းကုန်နေရပြီး...
သီချင်းချစ်သူတိုင်းက အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ တေးဂီတဗီဒီယိုမျိုးစုံကို ကြည့်ရှုဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းနားလည်ကြပြီး YouTube ရဲ့ သီးသန့် "billion views club." ထဲကို သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းတွေနဲ့ တေးဂီတတစ်ချို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Luis Fonsi & Daddy...